बच्चाहरूलाई बुद्धिमान कसरी बनाउने ?
आजकालको बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्नको लागि बच्चालाई तेज दिमाग बनाउन जरुरी छ । हरेक आमाबुबाको सपना हुन्छ कि उसको बच्चा बुद्धिमान बनोस् र पढाईमा अगाडि आउन सकोस् । तर, के तपाईलाई थाहा छ बच्चालाई बुद्धिमान बनाउने कुरा तपाईको हातमा छ भन्ने कुरा ?
बच्चाको मानसिक विकासमा आमा–बुबा र घरको वातावरणको मुख्य भूमिका हुन्छ । आफ्नो बच्चाको शारीरिक विकासको लागि उनीहरुको धेरै नै ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ । यदीबच्चालाई एक सुखदमाहौल र पौष्टिक आहार दिनुभयो भने बच्चाको दिमाग तेज बनाउन धेरै नै सहयोग हुन्छ । यस्ता छन् बच्चाको दिमाग तेज गर्ने उपाय
बच्चाको दिमागको विकासको लागि र उनीहरुलाई बुद्धिमान बनाउनको लागि सानो सानो दिमागी खेलहरु खेलाउनु पर्छ । पहिले उनीहरुलार्ई खेलको नियम बताउने र उनीहरुसँग बच्चा बनेर खेल्ने र गल्ती भएमा उनीहरुलाई भन्ने । यसले उनीहरुको दिमाग तेज हुन्छ ।
आमाको दूधबच्चाको दिमागी विकासको लागि धेरै नै महत्वपूर्ण हुन्छ । नवजात शिशुको लागि आमाको दुधभन्दा राम्रो चिज केही हुँदैन् । एक तर्फ स्तनपानले बच्चालाई गम्भीर रोगबाट बचाँउछ भने अर्कोतर्फ यो बच्चाको दिमागीबिकासको लागि महत्वपुर्ण मानिन्छ ।
डेनिस शोधकर्ताहरुकाअनुसार स्तनपान गराइएको बच्चा धेरै स्वस्थ र बुद्धिमान हुन्छ ।
बच्चाको दिमागको विकासको लागि नयाँनयाँ प्रविधि आइसकेको छ भनेर किताबलाई भुल्नहुँदैन । धेरै जसो बच्चाहरुलाई किताब पढ्ने सौख हुन्छ । बच्चाको यस सौखमा बाधा बन्नको सट्टा उनीहरुलाई किताब पढ्नको लागि प्रेरित गर्नु पर्छ ।
प्रेम र स्पर्श
वासिङ्गटन युनिभर्सिटिका शोधकर्ताहरुले गरेको एक अध्ययनअनुसार जो महिलाले आफ्नो नवजात शिशुलाई धेरै प्रेम र स्पर्श गर्छन् । उनीहरुको स्पर्शले बच्चाको हिप्पोक्यान्पस क्षेत्रमा धेरै नर्भ कोषहरु बन्छन् जसले बच्चाको दिमाग तेज हुन्छ ।
बच्चाको दिमागी विकासको लागि उनीहरुलाई पौष्टिक आहारको जरुरी हुन्छ । बच्चालाई खानामा प्रशस्त मात्रामा हरियो सब्जीहरु, फलफूल, द्ुध, मेवा, अण्डा जस्ता खाद्यपदार्थ दिनुहोस । बच्चालाई जंक फुडखान दिन पनि कम गर्नुहोस् । हरेक विहान बच्चालाई भिजाइएको तीनवटा बदाम खान दिनुहोस । यसले उनीहरुको स्मरण शक्ति तेज हुन्छ ।
बच्चाको मानसिक विकासको लागि पोषक तत्वको बाहेक पर्याप्त निन्द्राको जरुरी हुन्छ । अमेरिकामा भएको एक अध्ययनको अनुसार दिँउसो खाना खाएपछि करिव १ घन्टा निदाउनाले बच्चाको स्मरण शक्ति बढ्छ । युनिभर्सिटि अफ म्यासाचुसेट्सका शोधकर्ताहरुका अनुसार दिमाग मजबुत बनाउन र केही कुरा सिक्नको लागि दिँउसो को निन्द्रा महत्वपूर्ण हुन्छ ।